Spotify na-anwale olu ya olu | Akụkọ akụrụngwa
Ndị na-enyere olu aka aghọwo ihe a ma ama. Ndị ụlọ ọrụ dịka Amazon, Apple, Google ma ọ bụ Samsung enweela nke ha ma asọmpi a dị oke egwu. Ebe ọ bụ na ha niile chọrọ ka ndị ọrụ jiri nke ha mee ihe. Ma, ọ bụghị naanị ha. N'ihi na Spotify na-ewetakwa onye enyemaka ya. Companylọ ọrụ ahụ na-anwale ya ugbu a.
Ọ bụ onye inyeaka ga-etinye ya na ngwa nke ọrụ egwu egwu. Site na usoro nke iwu, ndị ọrụ ga-enwe ike ịjụ onye inyeaka na Spotify ịchọta ma kpọọ egwu, ọba, ndị edemede ma ọ bụ listi ọkpụkpọ. Ihe a niile na-enweghị mkpa ịme nyocha ọ bụla.
Enweela ụfọdụ ndị ọrụ nke ngwa ahụ ndị ọkachamara a gosipụtara. Ọ bụ ezie na n'oge ahụ ọ dị ka ụlọ ọrụ Sweden na-eme nyocha na ya. Mana ọ hapụlarị usoro mmechi mbụ. Ọzọkwa Spotify n'onwe ya egosila na ha na-arụ ọrụ ọhụụ a. Mana ha achọghị ikpughe ozi ndị ọzọ gbasara ya ma ọ bụ ụbọchị ọ ga - abụ ibido ya.
Ana m enyocha @Spotify tọ ntọala maka a smart ọkà okwu… pic.twitter.com/n1slxIFUNA
Ọ dị ka ezi uche dị na ngwa ahụ. Ebe ọ bụ na n'ụzọ a, na onye nnyemaaka na ojiji nke ọ ga-abụ nnọọ mfe na ihe ọma n'ihi na ọrụ. Naanị jụọ onye enyemaka a (anyị amaghị ma ọ ga-enwe aha) ịchọta ihe ịchọrọ ịnụ.
Ọtụtụ na-ahụ nke a dị ka ihe ụfọdụ site na Spotify iji mee ka ndị ọrụ rụọ ọrụ n'elu ikpo okwu ya wee gbochie ha ịgbanwe na Apple Music. N'ihi na Apple si gụgharia ọrụ aghọwo a nnukwu osompi nke Swedes. N'ezie, na United States ihe niile na-egosi na ọrụ Apple ga-abụ nke kachasị ukwuu.
Anyị na-atụ anya ịmatakwu ihe ọmụma banyere oge mmejuputa iwu ọkachamara a nke Spotify. Ọ dị ka ọrụ bara ezigbo uru ma ọ bụrụ na ejikọtara ya nke ọma, ọ nwere ike ịme iji ngwa ahụ dịkwuo mfe. Kedu ihe ị chere?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Noticias » Spotify na-amalite nyocha site na olu enyemaka ya
Anyị na-enyocha vidiyo nke gosipụtara anyị iPhone SE 2